MALALA NA-AMA UDA IWU IWU NKE NWA TRUMP
Previous EGBUGBU: OGOLOGO OGE MBEREDE NA ZAMFARA-SENATOR
Next MUSTAPHA: 2019 GA – EKPEBI N’ODINIHU IGBO
AKUKO UWA, Hot News, IHE N'EME N'OBODO, Local News, Politics, UTUTU OMA NU
Nobel Peace Prize Laureate, Malala Yousafzai, kwuru na ọ bụ “obi ọjọọ” nke onye isi mba United States na-elekọta Donald Trump na-ekewapụ ụmụ nke ndị si mba ha na-akwadoghị iwu, n’oge nleta mbụ ya na South America iji kwalite ọzụzụ ụmụ agbọghọ.
Enwere ihe karịrị ụmụaka 2,300 site n’aka nne na nna ha mgbe usoro nchịkwa ahụ malitere iwu “nnwere onwe” na ndị njem na-akwadoghị na mmalite May, na-achọ ịkatọ ndị okenye niile na-agafe ókèala site na Mexico gaa United States.
ỤLO IKPE KPEBIRI IKWADO NA MMALITE EKPERE BUHARI
Ụda kwụsịrị ịhapụ ezinụlọ dị iche iche n’ọnwa ikpeazụ na-agbaso nsogbu ndị ọha na eze na ihe ịma aka nke ụlọikpe.
“Nke a bụ obi ọjọọ, nke a ezighị ezi na nke a bụ ihe ọjọọ. Amaghị m otú onye ọ bụla ga-esi mee ya, “ka Yousafzai gwara Reuters na Wednesday. “Enwere m olileanya na ụmụaka nwere ike ịnọ na nne na nna ha.”
Okwu ya ndị dị iche iche dị iche iche n’ekpere ya na afọ gara aga maka ebe ndị Canada gbara ọsọ ndụ n’okpuru Prime Minista Justin Trudeau. Na Economic Forum nke ụwa na Davos afọ a, Malala jikwa ajụjụ banyere ihe ndị ruuru nwanyi.
Yousafzai, nke aha ya nke a maara n’oha ya, na-eleta Rio de Janeiro iji gbochie mgbasawanye agụmakwụkwọ ya, Malala Fund, na Latin America, malite na Brazil.
Nzube ya na Brazil, Latin America kasị ukwuu akụ na ụba, bụ ịkwado maka ohere ọha na eze na agụmakwụkwọ, nnukwu ọrụ mgbe mba ahụ gbanwee iwu mmezi iwu gọọmenti etiti gọọmenti etinyere na ezi okwu ruo afọ iri abụọ iji belata ụgwọ ọha mmadụ.
Ọ na-atụ anya na ihe ruru 1.5 nde ụmụ agbọghọ ugbu a anaghị aga akwụkwọ n’ụlọ klas, na-elekwasị anya na ndị obere obere ndị na-ahapụ ụmụ ọcha na ihe ndị dị mkpa dị ka agụmakwụkwọ na agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
“Ọ dị anyị mkpa iru ụmụ amaala na ndị Afro-Brazil na Brazil. Ụmụ nwanyị ahụ na-eche ọtụtụ ihe ịma aka, “ka Malala kwuru na a gbara ajụjụ ọnụ.
N’afọ 2014, a na – eme Malala ka ọ bụrụ obere ụlọ akwụkwọ Nobel, nke a na – akwanyere ùgwù maka ọrụ ya na ntọala ya, ọrụ ebere ọ kwadoro iji kwadoo òtù ndị ọkachamara maka ịkụziri ndị mmadụ akwụkwọ na Pakistan, Nigeria, Jordan, Syria na Kenya.
educaation foreign hot hot news HOTNEWS illegal Isimbido isimbido tv ISIMBIDONEWS ISIMBIDOPOSTS ISIMBIDOTV malala news policy POLITICS refugee school separation trump